လစဉ် ပုံမှန်ဝင်ငွေ စီးကြောင်း တစ်ခု ဖန်တီးခြင်း အိုင်ဒီယာများ | မာသင်
လစဉ် ပုံမှန်ဝင်ငွေ စီးကြောင်း တစ်ခု ဖန်တီးခြင်း အိုင်ဒီယာများ
မေးခွန်း။ ။ အကယ်၍ ကျန်းမာရေးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အက်ဆီးဒင့် တစ်ခု ကြောင့် ဖြစ်စေ ဒီနေ့ကစပြီး အလုပ်မသွားနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် လက်ရှိဝင်နေတဲ့ဝင်ငွေ ဆက်ဝင်နေမှာလား၊ ရပ်သွားမလား ?
အဖြေ(၁) ။ ။ ရပ်သွားမယ်။ ကိုယ်က လခစား၊ အလုပ်မသွားနိုင်မှ တော့ ဝင်ငွေတွေ တစ်ပြားမှ မဝင်တော့ဘူး လို့ဖြေရင်တော့ …
(မိတ်ဆွေ .. လစဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေစီးကြောင်းတစ်ခု ဆိုတာ အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိသားစု ရှိရင် ပိုလို့တောင် အရေးကြီးပါသေးတယ်။)
အဖြေ (၂)။ ။ မဖြစ်ပါဘူး။ ဘာအက်ဆီးဒင့်မှ မဖြစ်ဘူး၊ ကျန်းမာရေးလဲ ဒေါင်ဒေါင်မြည် နောင်လဲဘာမှ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး လို့ဖြေရင်…
( မိတ်ဆွေ .. ဆက်မဖတ်ပါနဲ့။ အချိန်ကုန်မှာ စိုးလို့ပါ။)
အဖြေ (၃) ။ ။ ကိုယ်ကအလုပ် လုပ်စရာမလိုပဲ လစဉ် ပုံမှန်ဝင်ငွေ စီးဝင်နေတယ် ဆိုရင် ….
( မိတ်ဆွေ . . . အခြားသူများလဲ အတုယူလို့ရအောင် နည်းလမ်းလေး ကျေးဇူးပြု၍ မျှဝေခဲ့ပါ။)
ကျွန်တော်တို့အားလုံး လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ရဲ့ဝင်ငွေအပြင်၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေစီးကြောင်းလေးတစ်ခု ကို ဖန်တီးဖို့အင်မတန်မှ လိုအပ်ပါတယ်။ နည်းသည်ဖြစ်စေ၊ များသည်ဖြစ်စေ ပေါ့။ အဓိက က ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကို နေ့စဉ် နဲ့အမျှ မလိုအပ်ပဲ ဝင်ငွေ တစ်ခု ဖြစ်နေဖို့ပါ။
ဥပမာ.. တိုက်ခန်းဌားမှ ရတဲ့ဝင်ငွေ မျိုးပေါ့။
ဒီလို ပုံမှန်ဝင်ငွေစီးကြောင်းလေးတစ်ခု ကိုဖန်တီးဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ စီးဝင်တဲ့ဝင်ငွေ နည်းတာများတာ အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ စမ်းချောင်းတွေ ပေါင်းလိုက်ရင် “မြစ်” ဖြစ် လာမှာပါပဲ။ အဓိက က ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ် အချိန်တွေကို မလိုအပ်ပဲ ပုံမှန်ဝင်ငွေ စီးကြောင်းအဖြစ် တသွင်သွင် စီးဝင်နေဖို့ပါ။ ( အလွယ်တကူတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ အခက်အခဲ နဲ့စိန်ခေါ်မှု ဆိုတာ အလုပ်တိုင်းမှာ ရှိတာပါပဲ။)
ဘယ်လို လုပ်ငန်းမျိုး၊ ဘယ်လို လုပ်ရတယ် ဆိုတာ….
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ များ အားလုံး ဝိုင်းဝန်းအကြံပြုကြရအောင်ဗျာ။
နေ့စဉ်လခစားမဟုတ်ပဲ ..ပုံမှန်ဝင်ငွေလေးရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ မိတ်ဆွေရဲ့အကြံလေးသိပါရစေ။